ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ Drive ထဲမှာ disk မရှိဘူးလား။ - အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အဓိက > အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ > Cmd.exe disk မရှိပါ - ပုံမှန်အဖြေများနှင့်မေးခွန်းများ
Cmd.exe disk မရှိပါ - ပုံမှန်အဖြေများနှင့်မေးခွန်းများ
ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ Drive ထဲမှာ disk မရှိဘူးလား။
ကွန်ပျူတာသို့ Administrator အနေဖြင့်ဝင်ရောက်ပါ။
Insert adisk ကိုဖြုတ်တပ်လို့ရတယ်မောင်း။
Start ကိုနှိပ်ပါ၊ My Computer ကို right-click နှိပ်ပြီး၊ Manage ကိုနှိပ်ပါ။
ယုတ္တိရှိသည့်အခန်းကန့်ကိုညာဖက်နှိပ်ပါမောင်းသို့မဟုတ်သင်ပြောင်းလဲလိုသောအသံအတိုးအကျယ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ပြီးနောက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုနှိပ်ပါကားမောင်းပေးစာနှင့် Paths ။
ဒါနဲ့ဒီ Philips စက်ကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်၊ အဲဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကစျေးသိပ်မကြီးတဲ့အိမ်တွင်းပြဇာတ်ရုံတစ်ခုဖြစ်တယ်။
သူတို့ကငါ့ကိုပေးတယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒါကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကိုပေးတယ်။ ဒါဟာပတ်ပတ်လည်ရပ်နေနှင့်ငါစတိုးဆိုင်များအတွက်ရေဒီယိုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါဒီအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကပတ်ပတ်လည်မှာရပ်နေပြီးဘုတ်မှာမှိုအချို့ရှိနေတာကြောင့်သူကတကယ်မလင်းဘူး၊ ရှေ့ကထိန်းချုပ်မှုတွေကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
ဒီဟာကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီကိုအလုပ်မလုပ်အောင်အများကြီးလုပ်ထားတယ်။ Hi ကြည့်ပါ၊ အရာအားလုံးကိုထပြီး DVD / CD drive ကိုဖွင့်ပြီးသည်နှင့်ယခုအလုပ်မလုပ်သော CD player အဟောင်း၌တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဒီတော့သင့်မှာ CD player ဟောင်းတွေရှိတော့ discs တွေကိုမဖတ်တော့တော့ရင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်။ မင်းဒါတွေ့လိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုမှာယန္တရားသည်ယခုအခါပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လည်းဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ယုန်တွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ပင်မကြိုးစားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Ok ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာပြုပြင်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ LookIt ဟာမင်းမြင်နေတာကိုသိရတာကောင်းတယ်။ ဒါက Motherboard ပါ။
ဒါဟာ amp, ရတယ်။ ယုတ္တိရှိတယ်။ ၎င်းသည် sound chip ဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားသည့် floppy disk drive ဤသည်မှာသင်မဝေးချင်သော power supply ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်ဤအရာများဖြစ်သော capacitors များအားလုံးကိုထုတ်ပစ်ချင်ပါသလား။ ဒါကြောင့်မင်းကသူမနဲ့ဝေးသွားမှာပါ၊ ဒါကြောင့်အဆင်ပြေသင့်တယ်၊ သူတို့မှာအကာအကွယ်အရာတစ်ခုလုံးရှိတယ်၊ အဲဒါကိုချိတ်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒါဆိုငါလုပ်ခဲ့တာတွေ၊ CD player တွေ၊ DVD player တိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကွဲပြားခြားနားပေမယ့်ငါ့ကိုဒီတစ်ခုအဘို့ပိုပြီးအာကာသပေးပါ။
ငါအံဆွဲကိုဖွင့်ပြီးတော့နေရာလွတ်ပေးဖို့ plug ကိုဆွဲလိုက်တယ်။ ဒါကလမ်းအတွက်အဆင်မပြေဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါအံဆွဲထုတ်ယူဖို့အတွက်အရာအားလုံးကိုမဖြုတ်ချင်ဘူး၊ ပထမဆုံးလေဆာကိုသန့်ရှင်းပါ။ သင်လိုအပ်သမျှသည်သန့်ရှင်းသော Q-tip တစ်ခုဖြစ်သည်။
ညင်ညင်သာသာဆေးကြောပါ။ ငါပြီးသားလုပ်ခဲ့တယ် ဒီဟာကငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်
၎င်းသည်သန့်ရှင်းသည်၊ သို့သော်သင်ထို့နောက် disc ကိုထည့်ပြီးပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မလားကြည့်နိုင်သည်။ ထိုသို့ဆိုပါက၎င်းကိုဖြုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သိသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုလေဆာ၏နောက်ဘက်သို့မဟုတ်စာဖတ်သူ၏နောက်ကျောတွင်လှန်လိုက်ပါ။
ဒီမှာပြန် ယခုတွင်ဆင်ခြေအနည်းငယ်၊ ဖဲကြိုးကြိုးအနည်းငယ်သာရှိကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ထိုသေးငယ်သောကလစ်များကိုယူပြီးအခြားနည်းကိုဆွဲယူပါကပျက်စီးလွယ်သည်။ ထပ်မံသတိထားပါ။ ဤအရာသည်အလဟ isn't မပိတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်အိုကေသွားသည်။ ဘုတ်၏နောက်ဘက်တွင်ထိုနှစ်ခုရှိသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ နည်းနည်း trimmers- အဲဒီမှာအိုး။
ဒီကလေးငယ်တွေကလေဆာရောင်ခြည်ကိုသူတို့တပ်ဆင်ပုံ၊ လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းအတွက်တစ်ခုနှင့်စီဒီတစ်ခုစီအတွက်လေစီးကြောင်းစီးဆင်းမှုပမာဏကိုညှိပေးသည်။ ဒီတော့ multimeter ရဖို့သင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုကဘာလဲ၊ တစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်ခြေမှာပို့စ်နှစ်ခုရှိတယ်၊ အလယ်မှာ post တစ်ခုမှာ omsm ထဲမှာ multimeter ထည့်ထားတယ်၊ အပေါ်နဲ့အောက်ကနေတိုင်းတာတယ်၊ ဤနည်းဖြင့်မူလသတ်မှတ်ထားသည်ကိုသင်တွက်ကြည့်ပြီး၎င်းကိုနာရီအနည်းငယ်လျှင်အနည်းငယ်လှည့်ပြီးထပ်ကြိုးစားပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင် multimeter မရှိပါကသင်လုပ်နိုင်သည်ဆိုလျှင် redneck နည်းလမ်းကိုပြောနိုင်ပြီး၎င်းသည်ကောင်းမွန်သော sharpie ဖြစ်သည်။ ဒါကိုမျဉ်းကြောင်းဆွဲပါ။ ပြproblemနာကဒီအရာတွေကတကယ့်အစစ်အမှန်တွေလား။ သေးငယ်သော။
အဲဒါကိုတကယ်ကိုခက်ခဲစေသည်။ ဒါကငါတို့ကြိုးစားကြတာပေါ့။ အရာကတော့၊ အကယ်၍ သင်ဝေးလွန်းလွန်းလျှင်ဝေးလောင်လိမ့်မည်၊ သင်မူလအခြေအနေသို့ပြန်သွားရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါကမင်းရဲ့မှတ်တမ်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ဒါကဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဘယ်သူ့ကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာသင်မီးရှို့ပစ်မယ်ဆိုရင်! စောလွန်းသေးတယ်၊ ငါနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဝက်အူလှည့်ရှာရမယ်။ ယခုသင်အလွယ်တကူသေးငယ်တဲ့ဝက်အူလှည့ကိုရှာတွေ့လျှင်ယခုသင်ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်သုံးနိုင်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကြီးမားတဲ့ဓါးငယ်လေးကိုပဲသုံးပေမယ့်တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အချက်ပါ။
Skype ကိုစမ်းသပ် mic
ဒီမှာထားလိုက်ပါ၊ ဘယ်မှာသွားနေတယ်ဆိုတာခံစားရနိုင်တယ်။ ငါ့လက်ချောင်းများငါယုံကြည်တယ်။ မင်းသူတို့ကိုမြင်နိုင်တာပေါ့။ ဒါ့အပြင်ဆံပင်တစ်ခုပဲဖြစ်မယ်။ သငျသညျအနိုင်နိုင်ကွေးကွေးမခံစားရပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာသေးငယ်တဲ့အဆင့်တွေကိုလုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာစမ်းကြည့်ချင်တယ်။ လေဆာ diode ကိုဖြတ်ပြီးစီးလွန်းတာကိုမလိုချင်လို့ဝေးဝေးမသွားချင်ဘူးဆိုရင်သင်လုပ်နိုင်တယ်၊ လောင်ကျွမ်းသွားနိုင်တယ်။ စက်ရုံမှာ, များသောအားဖြင့်အနီးအနားမှာသို့မဟုတ်လေဆာ Diode ၏ကန့်သတ်မှာ။
တနည်းကား၊ ငါဒီမှာတကယ်ကိုအကန့်အသတ်မရှိဘူး။ ဒီဘုတ်အတွက်သီးခြား diode ဆွဲထုတ်ခြင်းမရှိသော Look ကိုကြည့်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသွားပြီးသင့်ဘဝကိုပိုမိုရရှိရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲအောင်တွန်းပို့နိုင်သည်။
ဒီတော့ဒါကိုငါဖမ်းယူလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါကိုကင်မရာမှာမြင်ရရင်တောင်သူတို့ကိုငါနည်းနည်းလေးလှည့်ပြီးကြိုးကြိုးတွေယူတော့မယ်။ ဒီအထဲကို ၀ င်လိုက်ပါ၊ သင်အလုပ်လုပ်သည်ဆိုလျှင်သင်တင်ပို့နေတယ်ဆိုတာကိုသင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ သင်ကနောက်ဆုံးအကြိမ်မသွင်းခဲ့ဘူးဆိုပါစို့။ ဒါက youtube ဂီတပဲ။ ဒါကြောင့်ပရဟိတငွေကြေးအမြောက်အများရရှိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်လွယ်ကူတဲ့ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းမှာ CD player အဟောင်းရှိရင် DVD player တစ်လုံးဝယ်ယူလိုက်ရင်အဲဒါကိုပြင်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ပိုရလိမ့်မယ်
Drive ထဲ၌ disk မရှိပါကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်၊disk ကိုအဲဒီမှာပါရှိသည်မဟုတ်ဘူးမီဒီယာ။ support.microsoft.com အရ“Drive ထဲမှာ Disk မရှိဘူး'လုပ်နိုင်အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတစ်ခုခုသည်မှန်ကန်ပါကပေါ်ပေါက်ပါလိမ့်မည်မောင်းအဖြစ် configuredမောင်းအက္ခရာ C.၂၂ နို။ 2020
Friend I Shahbaz သည်သင့်အား Electric Point သို့ကြိုဆိုသည်။ တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့၏ DVD / Blue Ray Player သည် disc ကိုမဖွင့်ဘဲ 'Disk မရှိပါ' အမှားကိုပြသည်မှန်ဘီလူးကိုပြောင်းပါ။ ဤအမှားကိုမှန်ဘီလူးတပ်ဆင်မှုဖွင့်သောအခါဆောင်းပါးကိုဂရုတစိုက်စပါစေ။ ပျက်စီးနေသောဆလိုက်နှင့်လှည့်သောမော်တာကြောင့်ဖြစ်စေပျက်စီးသွားသောမှန်ဘီလူးမြန်နှုန်းနှင့်ပါဝါကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည် 1Vit တွင်အလွန်နိမ့်သောနှုန်းဖြင့်လည်နေပြီး 1Vit တွင် 1V supply တွင်ပါဝါမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ 1.5Vit speed, ဒါပေမယ့်သူမှာ current မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်လက်ချောင်းဖြင့်ထိသောအခါမော်တာပြောင်းသွားပြီး DVD player မှအမှားကိုပြင်လိုက်ပါတယ်။
LIKE ကိုမမေ့ပါနဲ့ || ခွဲဝေမှု || မှတ်ချက်
Drive ထဲ၌ disk တစ်ခုကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ။
ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါကားမောင်းeject ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း (ကွန်ပျူတာပြက်လုံးများတွင်သောက်စရာကိုင်သူဟုအများအားဖြင့်ခေါ်လေ့ရှိသည်) ။ dropdiscဗန်းထဲသို့ဘေးဘက်တံဆိပ်ကပ်ပါ။ ဗန်းကိုကွန်ပျူတာထဲသို့ညင်သာစွာမောင်းပါ။ အဆိုပါဗန်းသည်၎င်း၏လမ်းအတိုင်းပြန်သွားသည်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ဒီ Amandeep Singh Pawarand ။ သင်ဒီနေ့ Gyantoday ကိုအထူးကြည့်နေတယ်။ ငါဒီဆောင်းပါးမှာဘယ် USB stick လဲဆိုတာကြည့်တော့မယ်။ USB port ကို laptop ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ popup ဆိုတာရွေးစရာတစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်။ option ကို။
Hard drive ထဲကို hard drive ထဲသို့ထည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကမကောင်းသောကုဒ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုလျှင်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းအရင်းကိုထုတ်လုပ်သည်။ အကယ်၍ သင်က bootable pen drive တစ်ခုဖန်တီးရန်ကြိုးစားလျှင်၎င်းသည် Loacted ၏အကြောင်းပြချက်ကိုမဖွင့်သောကြောင့်၎င်းသည် bootable မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင်၏အမှားကိုဖြေရှင်းရန်သင်၏ screen ပေါ်တွင်သင်တွေ့ခဲ့သည့် pop option ကိုပြသည်။ hard drive ကို USB stick ထဲသို့ထည့်ပါ။ ၎င်းကိုမှန်ကန်စေရန်ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပါ။ ဒီတော့အချိန်ဖြုန်းမရ၊ စလုပ်ကြစို့သူငယ်ချင်းများ၊ ဒါကငါ့ရဲ့ laptop screen ပါ။ အခုငါပြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်၏ pin drive ပြသသည်ကိုပြပါမယ်။ floppy disk ကို pen drive ထဲသို့ထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ pen drive ကိုကျွန်ုပ်၏ laptop ထဲသို့ okkkMy USB stick သို့ချိတ်လိုက်ပါ in, ယခုသင်သည်ကျွန်ုပ်၏ laptop screen ပေါ်ရှိ pop option ကိုတွေ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ floppy disk ကို USB stick ထဲသို့ထည့်ပါ။ USB stick မဖွင့်ပါက bootable USB stick ကိုဖန်တီးသောအခါဤပြproblemနာသည်သင်၏လက်ပ်တော့မြင်ကွင်းတွင်ပေါ်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါဖြေရှင်းချက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုဖျက်လိုက်ရင်ငါ့ခြေလှမ်းတွေအတိုင်းလိုက်လုပ်ပါ။ ဒီ pcokay ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီ့အပေါ်မှာ right click လုပ်ပြီးသင်မြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ manager ရဲ့ option သို့သွားပါ။ Computer Management, System Tools, Task Manager, ရွေးချယ်စရာအချို့ရှိပါသည်။ သင်ရွေးချယ်ရန် Disk Management option ကိုရွေးချယ်ရန်သင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ သင်၏ USB stick နှင့် system hardware drives များ၏အခန်းကန့်ကိုသင်ကြည့်ရှုပြီးဖြစ်သည်။
ဒီတော့ unlocated အခန်းကန့်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Unococ လုပ်ထားသော partition တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဘောပင် drive ၏သင်၏ unlocated partition ဖြစ်သည်။ သင်၏ pen drive drive ၏အမည်ကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။ volumeokk kand သွားပါ။ နောက် option သို့သွားပါ။ ၎င်းကိုနှိပ်ပါ။ MBmegabyte ပုံစံဖြင့်သင်၏ pendrive အရွယ်အစားသည် OK ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်တနေရာ၌ pendive စာသို့မဟုတ် drive letter ကိုသင်ကြိုက်သလောက်ပြောင်းနိုင်သည်။ pendrive icon ကိုပြောင်းနိုင်သည်နောက် option သည် pendrive ကိုသင်အလိုရှိသည်အတိုင်းပေးပါ။ ဒါဆိုရင်ငါ့ရဲ့ pendrive sandisk က sandiskokunderscore 32gbok လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအမည်ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်။ partition က ntfsnn နည်းပညာ filesystemokay အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ နောက်ပြီး Finish ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်ပြီး Pendrive က pendrive ဖြစ်လာပြီးကျန်းမာတဲ့ Pendrive တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ NTFS format ပုံစံဖြင့်ဤ PC ကိုနှိပ်ပါ။ pendrive အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။ ငါ၏ pendrive တွင်လုံးဝဘာမှမနှိပ်ဘဲကျွန်ုပ်၏ pendri တွင်အကြောင်းအရာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဒေတာများကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းပြီးသတင်းအချက်အလက်မရှိပါ။ သင်၏ pendrive သည်လုံးဝအဆင်ပြေပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤပြproblemနာသည်လုံးဝပြေလည်သွားသည်။
Insert disc ဆိုသော Flash Drive ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ။
7 အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းများFix'ကျေးဇူးပြု၍ Disk ထည့်ပါဖြုတ်တပ်လို့ရတယ်disk ကို'အမှား
ပလပ်အင်USB flash driveအတွက်ယူအက်စ်ဘီဆိပ်ကမ်း။
My Computer သို့သွားပါdisk ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု။
ညာခလုပ်နှိပ်ပါUSB flash driveပြောင်းလဲကိုရွေးချယ်ပါကားမောင်းပေးစာနှင့်လမ်းကြောင်းများ။
ကွန်ပျူတာထဲမှာ disk မရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
Drive ထဲ၌ disk မရှိပါ။ disk device harddisk Dr1 ထဲသို့ထည့်ပါ။ Google ရှာဖွေမှုရလဒ်များနှင့် Microsoft အသိုင်းအဝိုင်းအရသုံးစွဲသူများသည် 'drive ထဲ၌ disk မရှိပါ။ အလားတူအမှားမက်ဆေ့ခ်ျကို drive ကို device ကို harddisk Dr1 စသည်တို့ထဲသို့ထည့်သွင်းပါ။
အဘယ်ကြောင့် vmware.exe တွင် disk မရှိပါ?
ချို့ယွင်းချက် - VMware.exe disk မရှိပါ - drive Device Harddisk1 DR1 ထဲသို့ disk ထည့်ပါ။ (DR2 DR3 DR4 စသည်) ။ VMware Workstation ဆော့ဖ်ဝဲကိုကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်လိုက်သောအခါ 'drive ထဲ၌ disk မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ drive ထဲသို့ထည့်သွင်းပါ' ဆိုသည့်အမှားအယွင်းရှိသည့်သတင်းစကားပေါ်လာပါမည်။ ဒါဟာတကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာအမှားတစ်ခုပါ။
Windows အမှားအယွင်းကြောင့် drive ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
Drive အမှားရှိအမှားတစ်ခုကိုဖြေရှင်းရန် Windows 10/8/7၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော drive အတွက် drive letter ကို C. မှလွဲ၍ မည်သည့်အက္ခရာသို့မဆိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အောက်ပါနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကိုအလုပ်ခန့်ရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အခမဲ့အခန်းကန့်မန်နေဂျာသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ Drive ထဲမှာ disk မရှိဘူးလဲ?
support.microsoft.com ၏အဆိုအရ၊ အောက်ပါအခြေအနေနှစ်ခုလုံးမှန်ကန်ပါက“ drive ၌ disk မရှိပါ” ဟုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သင့်တွင်ဖြုတ်တပ်နိုင်သည့် drive ကို drive အက္ခရာအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်ဖြုတ်တပ်နိုင်သည့် disk ထဲတွင်ဖြုတ်တပ်နိုင်သော disk မရှိပါ။ မောင်း။